Umshini wokucoca oomileyo onokuwukhetha?
Ukusebenza komcoco ococekileyo ukuba uphumelele, kufuneka ufune ukufumana izixhobo ezifanelekileyo, ngokuqinisekileyo, iintlobo zokucoca izinto ezinomileyo, kubandakanywa ukucoca i-dryers ibhloko liyinqobo engavumelekanga ukungayithobeli. Umgangatho ococekileyo ococekileyo uchaphazela ngqo umgangatho wokucoca ococekileyo ococekileyo, oko kuchaphazela ukusebenza komcoco ococekileyo kunye neenzuzo.
Ukukhethwa kwe-cleaners eyomileyo yinto ephambili yomsebenzi wokucoca umcoco oomileyo, ufuna ukukhetha abacocekileyo abanomgangatho ongciniweyo onotyali-mali abangenamava akuyona into elula ukuyenza. Enyanisweni, ukhetho lwewashi elomileyo, okhiye ukuba ukhethe uphawu. Uninzi lwezixhobo zokucoca ezomileyo kwiimarike, abatyali-mali baya kukhetha uphawu oluthile, ngakumbi abo banokuzimela ngokuzimeleyo nophuhliso lokuveliswa kwelophawu.
Njengokwenziwa ngokuqhelekileyo kwimveliso yamashishini amakhulu, i-new-developed development equipment ye-wash ENEJEAN inamathele ekuphatheni okulawulayo, uqeqesho oluqhubekayo lwezobugcisa lobugcisa, oluzinikezele kwimimandla ebanzi yeefranchisees lunezixhobo zokusebenza zokucoca ezomileyo. Ukwahluke kwezinye izinto ezininzi zokucoca ezomileyo zokusungula izixhobo zokubonelela ukuqhutyelwa kwee-franchisees, izixhobo zokucoca ezizimeleyo zenziwa ngokuphandle ngokuzimeleyo nophuhliso, ezithembeke ngakumbi kumgangatho, ukhuseleke ngakumbi. I-ENEJEAN iqela lezinto zokucoca ezomileyo ezisetyenziswe ngokuhambelanayo nemigangatho yamazwe ngamazwe ensimbi, kwaye kukho ukulawulwa kwe-microcomputer control, inkqubo yoqulunqo oluqinileyo ukuqinisekisa ukuba isitya sokucoca esisomileyo kunye nokuhlamba kakuhle ngexesha elifanayo, libuye lilawulwe ngokukodwa ixabiso lokuvelisa izixhobo.
Iminyaka engaphezu kwe-20 yezixhobo zokuvelisa iimveliso kunye ne-teknoloji yokuqokelela, yenza i-franchisees ye-ENEJEAN inikeze izixhobo ukuqinisekisa umgangatho wevenkile yokuhlamba impahla, kwaye bonke ukuba bahlole abatyali-mali be-ENEJEAN banokutyelela i-workshop ye-ENEJEAN yokuvelisa. I-ENEJEAN yophando oluzimeleyo nophuhliso lwezinto zokusebenza ngokubhekiselele kumgangatho omhle, onokuhlawulekayo, ngokukodwa ekuthengiseni umthengisi kuthethwa ngamaxabiso omhlaba ukuthengisa. I-ENEJEAN ecocekileyo i-yuan i-20000 yuan, iindidi ezipheleleyo, ukusebenza ngokugqwesileyo, umjikelezo wokusebenzisa ixesha elide, ukusebenza kulula, iifowuni zayo ezifanelekileyo, udidi lokuqala lokuqala, lunokunika umgangatho ophezulu wokujoyina umthengisi nomsebenzi wokuhlamba impahla.
Inqaku lokugqibela: Ixabiso elingakanani lomatshin...
Inqaku elilandelayo: Indlela yokukhetha iimpahla zo...